Sergiev Posad ट्रेडिंग पङ्क्तिहरू - प्रयोग संग किन्न!
निःशुल्क समय कहाँ खर्च गर्न तर एकै समयमा थप र त घर मा त यसो खान के थियो? बाँकी र खरीद भनेर - मा स्थिर समय दबाव को अवस्था यो राम्रो निःशुल्क प्रयोग गर्न समय खर्च गर्न महत्त्वपूर्ण छ। म खाना र गैर-खाद्य घरेलू वस्तुहरू दुवै संयोजन क्षेत्र व्यापार गर्न चाहन्छु। र यहाँ सबै आवश्यक सामान संग उत्पादनहरु को एक स्टोर, र सेवाहरू र मनोरञ्जन को दायरामा एक छत मुनि एकजुट, पहिलो ठूलो सपिङ्ग परिसर आउनुहोस्। यो राजीखुसीसाथ सांझ र सप्ताहन्तमा Sergiev Posad बासिन्दाहरू मा हतार यो मल थियो। Sergiev Posad किनमेल आर्केडहरू - चार-कथा इन्डोर
, खाना र गैर-खाद्य सामान संग धेरै पसलहरूमा सेवा र मनोरञ्जन सुविधा को को 11 हजार वर्ग मीटर को एक क्षेत्र संयुक्त जो बजार उत्पादन,। यहाँ सबैले सजिलै सबैका लागि केहि पाउन सक्नुहुन्छ र केवल ताजा गुणस्तर खाना प्राप्त हुनेछ। Sergiev Posad Lavra - यो किनमेल जटिल नजिकै रूस सबैभन्दा ठूलो shrines मध्ये एक छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसैले सांस्कृतिक सम्पदा र तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा राम्रो एक स्वस्थ ऊर्जा खाद्य बजार को लागि ठाउँ मामलामा।
खुशी साथ "Shopaholics" किनमेल जटिल को पहिलो तल्ला मा स्थित छ जो भोजन, संग पसलहरूमा मा एक छापे बनाउन सक्छ। कुनै पनि पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री को आनन्द यो खाना बजार पूर्ण उत्पादन सीमा प्रदान गर्दछ - फल र तरकारी, ताजा मासु, प्रत्यक्ष माछा र समुद्री भोजन, कुखुरा र कुखुराको उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, sausages र अर्ध-उत्पादन समाप्त। मीठो प्रेमीहरू पक्कै आफूलाई फेला पार्न हुनेछ मिठाई विभाग मा एक स्वादिष्ट उपहार - यहाँ प्रस्तुत पेस्ट्री, ताजा केक, मिठाई र कैंडी, आइसक्रिम हरेक स्वाद को लागि! Sergiev Posad बजार अधोवस्त्र र घर कपडा को एक विभाग को पहिलो तल्ला मा। यहाँ तपाईं पनि बैंकमा आवश्यक भुक्तानी गर्न, वा फार्मेसी मा आवश्यक औषधी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। शहर बजार चिन्ह लगाइएको र व्यक्तिगत घर फारमहरु देखि उत्पादनहरु को बिक्री को लागि महत्वपूर्ण व्यापार stalls मा - त्यसैले तपाईं पर्यावरण-मैत्री खाना, तिनीहरूले भन्न रूपमा, दायाँ "बगैंचामा देखि" खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
एफएमसी Mendeleev द्वारा समर्थित - भन्डार Sergiev Posad सपिङ्ग मल भित्र सबै उत्पादन, एक अनिवार्य गुणस्तर प्रमाणीकरण एफएमसी हुन्छ। यो निरीक्षण प्रासंगिक गुणस्तर स्तर संग उनको अनुपालन निर्धारण हानिकारक पदार्थ को खाना मा उपस्थिति पत्ता लगाउन डिजाइन गरिएको छ। त्यसैले, माल मानकीकरण र प्रमाणीकरण छ भने, त्यसपछि यसको गुणस्तर बारेमा चिन्ता गर्न सक्दैन। घटिया माल Sergiev Posad शहर बजार ठाउँ छैन। यो ज्ञात छ र मल मा खुद्रा ठाउँ भाडामा गर्ने उद्यमीहरू र यसलाई खरीद गर्न फेरि र फेरि फिर्ता गर्ने कृतज्ञ ग्राहकहरु
यहाँ। खैर, शहर बजार मा भाडादारों लागि पनि अनुकूल अवस्था सिर्जना गरियो। साथै, खुद्रा स्पेस भाडा धेरै अनुकूल सर्तहरू मा प्रस्ताव गरिएको छ।
किनमेल आर्केड को दोस्रो र तेस्रो फर्श
तिनीहरूले आफ्नो ग्राहकहरु संग एक खण्ड प्रस्ताव गैर-खाद्य उत्पादन, जहाँ व्यावसायिक परिसर को पट्टे बाहिर भाडादारों लागि धेरै अनुकूल अवस्था मा लगे छ। तपाईं नयाँ पोशाक वा आफ्नो बच्चा एउटा लामो-प्रतीक्षा उपहार किन्न निर्णय भने - Sergiev Posad सपिङ्ग मल को माथिल्ला तलाहरू मा एक नजर छ। पुरुष र महिला वस्त्र, बच्चाहरु उत्पादनहरू र खिलौने, छाला सामान र सामान - सबै स्वाद अनुरूप एक विस्तृत विकल्प। Sergiev Posad बजार पनि उत्पादन गृह लागि एक विशाल चयन प्रदान गर्दछ - फर्नीचर सैलून इन्डोर शहर बजार घर र कार्यालय को लागि एक उच्च गुणस्तरीय र स्टाइलिश फर्नीचर प्रतिनिधित्व छ। मानिसहरू! तपाईं आफ्नो सुन्दर आधा राम्रो वर्तमान खुसी निर्णय गर्नुभएको छ भने, तपाईं लागि व्यापार मंच एक आभूषण दोकान खोल्न र परिवार चाँडै साथै साँचेर राम्रो महिलाहरु को लागि, expectant आमा को लागि व्यापार बजार को दायरा!
यो बजार को एक उत्पादक किनमेल खुद्रा क्षेत्र एक शानदार भाग्ने र «Pent हाउस» रेस्टुरेन्ट-क्लब, Sergiev Posad सपिङ्ग मल को 4th तल्ला मा स्थित छ जसमा एक खाजा प्रदान गर्दछ पछि। यहाँ ध्यान Waiters तपाईं सबै भन्दा राम्रो युरोपेली व्यञ्जनहरु संग तयार व्यञ्जन प्रदान गर्नेछ, र तपाईं सबै भन्दा राम्रो तपाईं indifferent छोड्न जो छैन, मासु लागि व्यञ्जनहरु पाउनुहुन्छ। जहाँ, यदि यहाँ, तपाईं फ्रान्सेली सबैभन्दा स्वादिष्ट मासु प्रयास गर्नुहोस्, धेरै मूल प्रदर्शन चिकन वा झिंगा धेरै परम्परागत सीजर सलाद संग एक मनपर्ने, तर पनि वास्तविक प्रत्यक्ष जर्मन बियर र सबैभन्दा स्वादिष्ट आइसक्रिम रमाइलो गर्न सक्षम! «Pent हाउस» रेस्टुरेन्ट अतिथि छुट्टै प्रवेश, को यात्री लिफ्ट, छ गर्मी veranda उत्कृष्ट दृश्य त्रिएक सेन्ट Sergius संग जटिल को छत र वरपरको वरपर मा। सुखद पूरा सप्ताहन्त आयोजित
मा Sergiev Posad मल।
यो जटिल निःशुल्क र सुरक्षित पार्किंग प्रदान गर्दछ।
डिग्री prozharok स्टिक्स र आफ्नो विशेषताहरु
ठूलो संख्या मा के खाद्य पदार्थ समावेश आयोडिन
सिरका सार कसरी रोपेर गर्न? गरेको सम्झौता गरौं
जैतून को फरक के छ? उपयोगी गुणहरू
नयाँ केश Olgi Buzovoy बारेमा सबै
घर उड्यो कीरा: साइन र यसको अर्थ
Spregal: गाइड, सल्लाह
फ्रेम पूल को स्थापना: सामान्य आवश्यकताहरू
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध संस्थान। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध संस्थान, मास्को
क्लब "एयर" - सेन्ट पीटर्सबर्ग क्लब को रात